Markab Xoolo nool siday oo Sacuudiga dib u soo celiyay oo ku soo wajahan Dekeda Boosaaso
Markab Xoolo sida oo laga soo celiyay Sacuudiga ayaa saacadaha soo socda ku soo wajahan Dekeda Boosaaso ee Gobolka Bari, halkaasoo maalmo ka hor uu ka shiraacday.
Sarkaal ka tirsan Daacish-ta Soomaaliya oo lagu dilay duqeyn cirka ah
Sagal Radio Services • News Report • November 29, 2017
Sarkaal ka tirsan Ururka Daacish ee Soomaaliya ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay duqeyn Isniintii la soo dhaafay ka dhacday meel 70KM dhanka bari kaga beegan magaalada Boosaaso.
Weeraro xalay ka dhacay magaalada Boosaaso oo uu ku dhaawacmay Gudoomiyihii Carmo
Labo weerar oo ay fuliyeen dabley hubeysan ayaa xalay ka dhacay magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari, iyadoo mid ka mid ah weeraradaas uu ku dhaawacmay Gudoomiyihii degmada Carmo ee Gobolka Bari.
Al-Shabaab oo xalay weeraray bar koontarool ku taal magaalada Boosaaso
Al-Shabaab ayaa xalay weerar qorsheysan ku qaaday bar ciidan oo ku taal magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari, halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan Maamulka Puntland.
Weerar Bambaano oo xalay lagu qaaday saldhig boolis ku yaal Boosaas
Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in weerar bambaano lagu weeraray Saldhiga Booliska magaaladaas, iyadoo weerarkan uu sababay dhaawacyo soo gaaray askar ku sugneyd saldhig iyo qof rayid ahaa.
Daawo sawiradda:Boosaaso: booliska oo soo bandhigay 12 qof oo lagu soo eedeeyey qarax
Kaluumeysatada Boosaaso Oo Ka Cabanaysa Maraakiib Shisheeye Oo Iska Guraneysa Kheyraadka Dalkeenna
Kaluumeysatada magaalada Boosaaso ayaa ka cabanaya maraakiib shisheeye oo si sharcidarro ah uga kaluumeysta xeebaha dalkeenna.
Ciidamadda Amaanka Boosaaso oo Howlgalo ka wada Gudaha Magaaladda
Gudaha Magaaladda Boosaaso ee Xarunta Ganacsiga Puntland ayaa Waxaa lagu Arkayaa Ciidamo Badan oo kuwa Amaanka ah kuwaas oo Gaaf wareegaya Wadooyinka iyo Xaafadaha Magaaladda Boosaaso.
Boosaaso oo saakay si weyn looga ciiday iyo meela kale oo soomaaliya ka mid ah oo aan laga Dukan Salaada Ciida.
Sagal Radio Services • News Report • October 15, 2013
Magaalada Boosaaso ee Caasimada GanacsaigaPuntland Saaka waxaa lago ciiday si qurux Badan iyadoo dadweyne aad u farabadan kuwaas oo siyaabo kala Duwam u labisan iyadoo sido kalena Caruur farabadan ay Wadooyinka Muhiim ah ee Boosaaso dhex Marayeen Garoonka Kubada Cagta ee Magaalada Boosaaso ayaa saaka lagu tukaday Salaadi ciida iyadoo dadweynaha ay la Tukanayeen masuliyin kasocda Maamulka Puntland.